Chondrodite, laga soo bilaabo Myanmar / koox dharka ah oo dhagax / sharaf ah / video
Chondrodite, laga bilaabo Myanmar
Chondrodite waa macdan minosilicate macmacaan (Mg, Fe) 5 (SiO4) 2 (F, OH, O) 2. Inkasta oo ay tahay macdan dhif ah, waa xubinta inta badan la kulmay ee kooxda humite ee macdanta. Waxaa la sameeyaa kaydka kaydka nukliyeerka ee laga helo degomitirka miyirka deegaanka. Waxaa sidoo kale laga helaa iskuxir iyo serpentinite. Waxaa laga helay 1817 on Mt. Somma, qayb ka mid ah dhismaha Vesuvius ee Talyaaniga, oo lagu magacaabo Giriigga "granule", oo ah caado caadi ah ee macdantaas.
Mg5 (SiO4) 2F2 waa nuuca xubinta ugu dambeeya sida ay bixiso Ururka Caalamiga ah ee Mineralogical Association, tiro badan oo maceeysan 351.6 g. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira caadi ahaan OH oo ku yaal goobaha F, si kastaba ha ahaatee, Fe iyo Ti waxay beddeli karaan Mg, markaa caanaha macdanta dabiiciga ah ayaa si fiican u qoran (Mg, Fe, Ti) 5 (SiO4) 2 (F, OH, O ) 2.
Chondrodite leh magnetite, Tilly Foster mine, Brewster, New York, USA
Chondrodite waa jaalle, oranji, casaan ama bunni, ama dhif ah midab aan lahayn, laakiin wareegga kala duwan ee midabka midabku waa mid caadi ah, iyo taarikhda dhibcaha ee chondrodite, humite, clinohumite, forsterite iyo monticellite ayaa la soo sheegay.
Cudurka kondrodite waa ciriiri (+), oo leh astaamo jilicsan oo si kala duwan loo soo sheego sida nα = 1.592 - 1.643, nβ = 1.602 - 1.655, n ° = 1.619 - 1.675, marin = 0.025 - 0.037, iyo 2V oo loo qiyaaso 64 ° ilaa 90 °, loo xisaabiyey: 76 ° ilaa 78 °. Calaamadaha dib udhaca ayaa u muuqda in ay kor u kici karaan norbergite ilaa clinohumite ee kooxda sharafta leh. Waxay kaloo kordhinayaan Fe2 + iyo Ti4 + iyo (OH) - bedelida F-. Dispersion: r> v.
Chondrodite waxaa inta badan laga helaa aagaha xidhiidhka metamorphic u dhexeeya dhagaxyada karantameynta iyo dabiiciga acidic ama alkalineen halkaa oo ay ku jirto daawada fluorine ee lagu soo saaro hababka metasomatic. Waxaa la sameeyaa fuuq-celinta olivine, (Mg, Fe2 +) 2SiO4, oo degan heerar kala duwan iyo cadaadisyo kuwaas oo ay ku jiraan kuwa jira ee ka mid ah qaybta sare ee ugu sarreeya.